Injini yeCorona yashintsha igama layo yaba yiSolar2D futhi yaba umthombo ovulekile | Kusuka kuLinux
Injini yeCorona yashintsha igama yaba yiSolar2D futhi yaba ngumthombo ovulekile
ICoronaLabs Inc. (obekwaziwa njenge-Ansca Mobile) ngu- inkampani yesoftware YeCalifornia eyakha ipulatifomu yokuthuthukisa umdlalo ne-2D. SUkuthuthuka okukhulu kugxile kuCorona SDK okuwuhlaka lokuthuthuka lweselula olwenza izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-iOS, i-Android, i-Kindle, iWindows Phone, i-tvOS, i-Android TV, neWindows Mac kanye nedeskithophu kusuka kusisekelo sekhodi esisodwa.
ICorona luhlaka lwesiphambano esenzelwe ukuthuthukiswa okusheshayo kwezicelo nemidlalo olimini lwesiLua. Kungenzeka kubizwe abaphathi ku-C / C ++, Obj-C naseJava besebenzisa ungqimba lweCorona Native.
1 Mayelana neCorona
1.1 Khipha ikhodi, inketho yokugcina (endala ethembekile)
1.2 Le phrojekthi idlulela ezandleni zomphakathi
Ukusheshisa ukuthuthukiswa kanye neprototyping, kuhlongozwa i-simulator ekuvumela ukuthi uhlaziye ngokushesha umthelela wanoma yiziphi izinguquko zekhodi kuhlelo lokusebenza, kanye namathuluzi wokuvuselela ngokushesha isicelo sokuhlolwa kumadivayisi wangempela.
I-API enikeziwe inezingcingo ezingaphezu kwezingu-1000, kufaka phakathi amathuluzi we-sprite animation, ukucubungula umsindo nomculo, ukulingisa kwenqubo yomzimba (ngokususelwa ku-Box2D), ukugqwayiza kwezigaba eziphakathi zokunyakaza kwento, izihlungi zemifanekiso esezingeni eliphakeme, ukuphathwa kokuthungwa, ukufinyelela kumakhono wenethiwekhi, njll. . Ukubonisa ihluzo, i-OpenGL iyasetshenziswa. Omunye wemisebenzi esemqoka entuthukweni yi nokwenza kahle kokusebenza okuphezulu. Ilungiselelwe ngokwahlukana ngaphezu kwama-plugins ayi-150 nezinsizakusebenza ezingama-300.
Khipha ikhodi, inketho yokugcina (endala ethembekile)
Le nkampani Muva nje umemezele ukuthi uyekile ukusebenza futhi waguqula injini yemidlalo ithuthukiswe nohlaka lokwakha izinhlelo zokusebenza zeselula zeCorona kuphrojekthi evulekile ngokuphelele.
Izinsizakalo ebezihlinzekwa phambilini yiCoronaLabs, lapho intuthuko yayixhunyaniswe khona, se idluliselwe kusimulator esebenza ohlelweni lomsebenzisi noma izothathelwa indawo ngama-analogs amahhala itholakalela ukuthuthukiswa komthombo ovulekile (ngokwesibonelo, iGitHub).
Ikhodi yomqhele ihunyushwe isuka kwiphakheji yelayisense yokuthengisa ye-GPLv3 + iye kwilayisense ye-MIT. Cishe yonke ikhodi ehlobene neCoronaLabs, kufaka phakathi ama-plugins, nayo ivulekile ngaphansi kwelayisense ye-MIT.
Mayelana nalesi sinqumo UVlad shcherban , unjiniyela oholayo wabelana ngokulandelayo:
Sanibona nonke. Lo nguVlad Shcherban, unjiniyela ohola phambili kaCorona kule minyaka embalwa edlule. Kunezinto eziningi engingathanda ukuxoxa ngazo, ngakho-ke ngizozama ukuba mfushane ngangokunokwenzeka, ngemininingwane eminingi kwi-FAQ engezansi
Njengoba usuvele uyazi, kusukela ngoMeyi 1, 2020, iCorona Labs Inc., inkampani ayisasekho.
Kepha iCorona (injini enika amandla izinkulungwane zezicelo) ayiqediwe. Kuqala nje njengephrojekthi yomthombo ovulekile. Ngihlela ukuqhubeka nokusebenza kuyo ngentuthuko ebanjelwe imali. Lo mqondo ubonakala wemukelwe kahle kakhulu umphakathi kwiForamu naseSlack, nabantu asebevele benikela ukuxhasa imizamo yami yokugcina uCorona ephila.
Nginethemba elikhulu. Uma lo mkhuba uqhubeka, kubukeka sengathi ngizokwazi ukuqhubeka ngisebenze eCorona ngokugcwele. Uma uthanda ukusebenzisa iCorona, noma uyisebenzisela ibhizinisi futhi ufuna ukuthi ukuthuthuka nokusekelwa kwayo kuqhubeke, ngicela uxhase umkhankaso wami wokubuyisa abantu abaningi kuPatreon noma abaxhasi beGitHub. Ukuxhaswa kwakho kuzothokozelwa kakhulu yibo bonke abagqoka iCorona.
Le phrojekthi idlulela ezandleni zomphakathi
Ukuthuthuka okuqhubekayo kuzoqhubeka ngumphakathi ozimelengenkathi ukubamba iqhaza kukanjiniyela wokhiye wangaphambili kuyagcinwa uhlose ukuqhubeka nokusebenza kuphrojekthi ngokugcwele. Ukubuyiselwa kwemali ngobuningi kuzosetshenziselwa ukukhokhela.
Kwabuye kwamenyezelwa nokushintshwa kwamagama kancane kancane kusuka kuphrojekthi kuya eSolar2D, njengoba igama iCorona lihlotshaniswa nokuvalwa kwenkampani futhi esimweni esikhona manje kubanga ukuhlangana okungelona iqiniso namaphrojekthi abhekana nezinkinga ezibangelwa ukutheleleka kwe-COVID-coronavirus. 19.
Futhi lokho ngaphambi kokushiya iphrojekthi abathuthukisi benza umzamo wokwenza i- ukufuduka kwezinkundla kuya endaweni entsha, kusukela eyedlule ibingasasebenzi futhi ingadala izinkinga emphakathini ezilawula iphrojekthi.
Ipulatifomu entsha manje isiyatholakala kumaforamu.solar2d.com
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungathintana nesitatimende Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Injini yeCorona yashintsha igama yaba yiSolar2D futhi yaba ngumthombo ovulekile
Uhlobo olusha lweKaidan 0.5.0, iklayenti lomthombo ovulekile le-XMPP, selivele likhishiwe
Ngithuthukisele ku-Ubuntu 20.04 LTS kanye ne-Steam nemidlalo yevidiyo yanyamalala